နန်းသီရိလွင်| February 27, 2013 | Hits:6,682
တာချီလိတ်တွင် ရွှေတူးဖော်ရေးကြောင့် လယ်ယာမြေ ဧက ၃၀၀ ခန့် ပျက်စီးမှုဖြစ်ပွားကန့်ဘလူ ထွန်တုံးတိုက်ပွဲဝင် တောင်သူများ စားဝတ်နေရေး အခက်ကြုံနေစဉ့်ကူးတွင် တပ်သိမ်း လယ်ဧက ၃၀၀၀ ကျော်အတွက် ထွန်တုံးတိုက်ပွဲ ဆက်လက် ပြုလုပ်ရန်ကုန်တွင် ပဋိပက္ခ ဖြေရှင်းရေး ရဲ အင်အား ၅၀၀ ခန့် ဖွဲ့စည်း ထားရှိမည်ရဲတပ်ဖွဲ့အတွက် လူစုလူဝေး ထိန်းသိမ်းမှု သင်တန်း EU ပေး
မြန်မာတိုင်းရင်းသူ February 28, 2013 - 3:19 am လယ်သမားတွေကလဲ လယ်လုပ်ဘို့ လယ်မြေလိုတယ်။ သူတို့ လယ်မြေတွေကို မတရားသိမ်းယူထားတာ၊ နစ်နာကြေးလျော်ကြေးကိုလဲ ထိုက်တန်စွာ မပေးထားရင် သိမ်းသူဘက်က မတရား ဥပဒေမဲ့ ပြုကျင့်ခဲ့တာပဲ။
Reply မြန်မာတိုင်းရင်းသူ February 28, 2013 - 3:21 am တခု ကျန်သွားတယ်။ အပေါ်က ဓါတ်ပုံထဲက ဗီဒီယို ရိုက်ယူနေတဲ့ ဆရာကြီးက နောက်မှ သည် ဗီဒီယိုနဲ့ တိုက်ပြီး ဆန္ဒပြ လယ်သမားတွေကို အိမ်တိုင်ယာရောက် လိုက်ဖမ်းချင်လို့လား မသိ။ နောက်တခါ လယ်သမားတွေ သူ့ကို target ထား ၀ိုင်းရိုက်လိမ့်မယ် ထင်တယ်။
Reply banbanho February 28, 2013 - 9:52 am အကြမ်းဖက်တဲ့နည်း နဲ့ ရဲတွေ ကို တိုက်ခိုက်တာ မကောင်းပါဘူး
Reply banbanho February 28, 2013 - 10:17 am l want peace.j
Reply banbanho February 28, 2013 - 11:09 am မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ ပြောတာ မှန်ပါတယ်
Reply banbanho February 28, 2013 - 11:21 am မြန်မာတိုင်းရင်းသူ ပြောတာမှန်ပါတယ်
Reply သူရ February 28, 2013 - 3:10 pm မအူပင်လယ်သမားပြသာနာကိုကြည်.ပြီးအကုန်လုံးသင်ခန်းစာရသင်.ပြီမဖြစ်သင်.ပဲဖြစ်ရတဲ.တာ လယ်သိမ်းထားတဲ. company တွေအနေနဲ.လဲပြသာနာကို လူကြီးလူကောင်းပီပီ ရင်ဆိုင်ဖို.ကောင်းပြီ ဘာမှမသိနားမလည်တဲ. လယ်သမားတွေကို ခုတုံးလုပ်ပြီး နိုင်ငံရေးအမြတ်ထုတ်နေတဲ. လူတွေလဲ အသိတရားရသင်.ပြီ